Maalinta kaneecada adduunka ayaa sidoo kale waxaa u dabbaaldega Dalxiiska Adduunka Maanta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Maalinta kaneecada adduunka ayaa sidoo kale waxaa u dabbaaldega Dalxiiska Adduunka Maanta
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Markii la waydiiyey in duumadu ay saamayn taban ku leedahay dalxiisayaasha Koonfur Afrika, 60% daneeyayaasha s oo la wareystay xilli duumadii ugu dambaysay ayaa oggolaaday su'aasha, taas oo tilmaamaysa in duumadu saamayn taban ku leedahay tirada dalxiisayaasha booqda aagga. , 20ka Ogosto ayaa loo asteeyay Maalinta Kaneecada Adduunka si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan jirrada iyo cudurrada ay keento kaneecadu.
Jimcaha, 20ka Ogosto waa Maalinta kaneecada Adduunka, sababna u ah socdaalka iyo warshadaha dalxiiska adduunka in la xusuusto lana sii wado dagaalka ka dhanka ah qatartaan.
Maalintaan waxaa loola jeedaa in lagu boorriyo dadka inay gartaan halista ku soo fool leh cudurrada kaneecada sida duumada & qandhada dengue.
Dadku waa inay qaataan tallaabooyin ka hortag ah si ay uga badbaadaan cudurrada kaneecada ku dhasha meel kasta oo adduunka ah.
Sannad kasta maalinta kaneecada adduunka, dunidu waxay xustaa ogaanshaha in kaneecada Anopheles ee dheddigga ah ay tahay feyraska gudbiya duumada u dhexeysa aadanaha. Natiijadan muhiimka ah, oo uu sameeyay Sir Ronald Ross sanadkii 1897, ayaa saldhig u noqotay dhowr barnaamij oo lagu xakameynayo duumada oo ay ka mid yihiin buufinta haraaga gudaha iyo shabagyada lagu daweeyo cayayaanka iyo sidoo kale horumarinta daawooyinka daaweynta duumada iyo kiimiko -mareenka.
Dabaaldeggu wuxuu ku saabsan yahay sida daahfurkaani u beddelay koorsada taariikhda caafimaadka.
In kasta oo malaayiin qof la badbaadiyey natiijadan keliya, haddana duumadu waxay weli culays weyn ku haysaa waddammada uu cudurku ku dhacay, iyada oo lagu qiyaasay 409,000 oo dhimasho ah oo uu sababay cudurku adduunka oo dhan sanadka 2019 oo keliya.
Sannadkii 2014 wax aan la dawayn karin fayraska kaneecada keena dalxiiska loo hanjabay Kariibiyaanka waxaa laga helay Kariibiyaanka waxayna abuurtay khatar dhab ah oo ku wajahan dalxiiska.
Maanta, baarayaasha Malaariyada Target iyo saynisyahannada adduunka oo dhan waxay sii wadaan inay bartaan kaneecada xambaarsan duumada si ay ugu dadaalaan inay ka sii hormaraan dulin mar walba soo kordhaya oo ay helaan siyaabo cusub oo wanaagsan oo lagula dagaallamo cudurka.
Warka ku saabsan Maalinta kaneecada Adduunka ayaa ka imanaya waddan kaneecadu ay halis dhab ah ku tahay caafimaadka iyo badbaadadaba waa Hindiya.
Maalinta wacyi -gelinta Maalinta kaneecada waxaa lagu faafiyaa baraha bulshada iyadoo loo baahan yahay in laga ilaaliyo kaneecada.
Iyada oo leh sumadda 'Cayayaanka Dila, Cudurada Dila', shirkad cayayaan ah oo Hindi ah ayaa ballanqaaday inay guri kasta ka dhigi doonto cudur la'aan.
Shirkaddu waxay waddaa barnaamijyo wacyigelin macmiil iyo wada -xaajoodyo iyadoo lala kaashanayo kanaallada wararka ee hoggaaminaya.
Iyada oo adeegsanaysa barnaamijkeeda EMBED (Tirtiridda Cudurrada Faafa ee Kaneecada), GCPL waxay ku tallaabsatay horumar wanaagsan ka-hortagga duumada heer caws-xidid.
Sanadkii 2015, barnaamijka waxaa laga bilaabay Madhya Pradesh iyadoo lala kaashanayo Wasaaradda Caafimaadka & Daryeelka Qoyska si looga takhaluso duumada tuulooyinka aadka u daran.
Barnaamijku wuxuu daboolay in ka badan 800 tuulo oo ku yaal 11 degmo oo kala ah Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, iyo Chhattisgarh. GCPL waxay iskaashi la samaysay daneeyayaasha si ay u socodsiiso barnaamijyada isbeddelka dabeecadda ee degdegga ah ee gobollada leh tilmaame dulin oo sannadle ah oo khatarta halista gudbinta duumadu ay ugu sarrayso.
Tani waxay keentay in 24% 824 tuulooyin wax-ka-qabad ah ay soo sheegaan 0 xaaladood oo duumo ah dhammaadkii FY20-21.
Tuulooyinka soo haray waxay ku jireen sannadkii 1aad ee wax ka-qabashada ujeeddadiisuna waxay tahay in laga dhigo malaar-laawe sannadka 2-aad iyo sannadka 3-aad.
GCPL, marka lagu daro, waxay ballaarisay faylalka tacliinta xakamaynta iyo maareynta dengue ee 4 magaalo (Bhopal, Gwalior, Lucknow, iyo Kanpur) waxayna sidoo kale taageero farsamo siineysaa Barnaamijka Xakamaynta Cudurrada Cudur -dhaliyaha Qaranka (NVBDCP) oo hoos imaanaysa Wasaaradda Caafimaadka & Qoyska ee GOI. Daryeelka.
Faallo ka bixitaanka munaasabadda, Maamulaha Sunil Kataria, ayaa yiri, “GCPL, dadaalkayagu waa inaan Hindiya ka dhigno mid caafimaad leh, ammaan ah, kana xorooba cudurada laga qaado xoolaha. Tan iyo masiibada COVID-19, waxay noqotay mid aad muhiim u ah in la feejignaado iyada oo ay ugu wacan tahay halista laba jibaaran ee cudurrada kaneecada iyo fayraska. Maalinta kaneecada Adduunka, waxaan ku boorineynaa qof walba inuu qaato tallaabooyin looga hortagayo duumada ama dengue.
Waxaa naga go'an inaan wadno dadaalladan oo kale oo awood u siinaya dadka leh wacyiga iyo xalka lagama maarmaanka u ah inay la dagaallamaan halista kaneecada.
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Caafimaadka (HMIS), oo ah miiska xogta ee Hawlgalka Caafimaadka Qaranka (NHM), ayaa soo sheegay kumanaan kiis oo duumo iyo kiisas dengue ah oo ka dhacay Hindiya intii u dhexeysay Abriil 2020 illaa Maarso 2021.
Marka laga reebo saamaynta caafimaad, culayska dhaqan-dhaqaale ama kharashka sannadlaha ah ee dalka ee duumada iyo qandhada ayaa aad uga badan.
Qaadashada garashada walaacyadan, GCPL iyada oo adeegsanaysa hindisaheeda bulsheed iyo badeecadaha hal-abuurka leh ayaa looga golleeyahay in ay kiciso isbeddelka dabeecadda dadka dhexdooda si ay uga badbaadiyaan cudurrada kaneecada dhalisa.
Talo Jayant Deshpande, Xoghayaha sharafta leh, Ururka Xakamaynta Cayayaanka Guriga (HICA) - waaxda warshadaha ee qeybta sunta cayayaanka ee qoyska, ayaa tiri, “Si wax looga qabto khatarta kaneecadu keento, waa in qofku adeegsadaa xalka habboon oo la aamini karo oo keliya.
Suuqa waxaa ku soo qulqulaya badeecooyin khayaali ah sida ulaha fooxa ee kaneecada kaneecada ee sharci -darrada ah oo aan summad lahayn.
Alaabooyinkan oo ka yimid ciyaartooy aan damiir lahayn waxay u ekaan karaan kuwo jaban laakiin ha soo marin hababka wax -soo -saarka la nidaamiyay iyo hubinta asaasiga ah ee xuduudaha nabdoonaanta ee maqaarka, indhaha, iyo hab -dhiska neefsashada ee loo xilsaaray dhammaan alaabada sunta cayayaanka ee guriga.
Dhammaan fooxa kaneecada kaneecada ee sharci -darrada ah waxay dhegtaa caadooyinka qallafsan oo laguma tijaabiyo xuduudaha aan kor ku soo sheegnay. Isticmaal kasta oo ulahaas fooxa ah ee kaneecada kaneecada sharci -darrada ah aad bay khatar ugu tahay caafimaadka muwaadiniinta ku jira kooxaha da'da. Waxaan si adag ugula talineynaa qof walba inuu isticmaalo kaliya qaababka iyo alaabooyinka ay dowladdu oggolaatay. ”
Dr. Myriam Sidibe, oo ah khabiir ku takhasusay caafimaadka adduunka iyo borofisar sharafeedka ku -dhaqanka ee London School of Hygiene and Tropical Medicine, ayaa yiri, “Hindiya waxay shaqo fiican ka qabatay hoos u dhigidda kiisaska duumada iyo dengue 5tii sano ee la soo dhaafay. Iyada oo dhammaanteen aan hagaajineyno nolosheenna si aan uga hortagno COVID-19, dadaallada lagu sii yareynayo saameynta cudurrada kaneecada ayaa sii socota.
Dawladuhu waxay u yeeri karaan gacmaha oo dhan si ay wax uga qabtaan masiibada COVID-19, laakiin maahan inaan joojino ololaheena dheer ee ka dhanka ah kaneecada. Iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka ahi waxay muhiim u noqon doonaan hoos u dhigidda culayska dhaqan-dhaqaale ee Hindiya oo ay ugu wacan tahay duumada, dengue, iyo cudurrada kale ee noocan oo kale ah.
Iskaashigani wuxuu horseedi karaa hal-abuurnimo iyo moodooyin badan oo xiiso leh si looga hortago faafitaanka cudurrada kaneecada. ”
Cuthbert Ncube ka Dalxiiska Dalxiiska Afrikad wuxuu xusuusinayaa cudurrada kaneecada ee adduunka inay weli halis ku yihiin warshadaha safarka iyo dalxiiska gaar ahaan Afrika, waana inaan la iloobin marka la marayo dhibaatada COVID-19.